» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु, भाग १ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु, भाग १ (भिडियो)
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार २१:००
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २० भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले देश तथा विदेशका प्रतिभावान गायक गायिकाहरुले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस सिजनको ६ वटा एपिसोडहरु प्रसारण भईसकेका छन् । अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसनबाट छानिएर उनीहरु ब्लाईन्ड अडिसनमा सहभागी भएका हुन् । चर्चित गायक दिप श्रेष्ठ, राजु लामा, प्रमोद खरेल र गायिका आस्था राउतले प्रतियोगितामा कोचको भूमिका निभाइरहेका छन् । अहिलेसम्म ३२ जना सहभागीहरु ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका छन् भने ९ जनाको यात्रा ब्लाईन्ड अडिसनबाटै सकिएको छ । ३२ जनामध्ये १३ जना प्रतियोगीहरुले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका छन् । यस भिडियो सामाग्रीको पहिलो भागमा अहिलेसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका ३२ जना प्रतियोगीहरुमध्ये ५ जना जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेरौँ भिडियो–
१) रमा घतानी यादव, मकवानपुर–सानैदेखि सँगीतमा रुचि भएकी रमालाई परिवारका सदस्यले पहिलेदेखि नै गायिका बन्छिन् होला भन्ने विश्वास गर्थे । २६ वर्षीय रमा मकवानपुरकी हुन् । कक्षा ६ मा पढ्दादेखि नै गैरसरकारीसंस्थामा काम गरेकी रमाले उक्त कामलाई कक्षा १० सम्म नै निरन्तरता दिईन् । त्यही संस्थाकै छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेकी रमालाई साँगितिक क्षेत्र र काम मध्ये एउटा छान्नुपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः उनले आफ्नो करियरलाई रोजिन् र आमालाई मात्र जानकारी गराएर संस्था छोडिन् । काम छोडेर काठमाडौँमा आएकी रमालाई ललितकला क्याम्पसमा सँगीत पढ्ने ठूलो रहर थियो तर त्यहाँ ईन्टर पढ्न नपाएका कारण उनले बाध्य भएर अर्कै विषयमा प्लस टु हुँदै मास्टर्ससम्म अध्ययन गरिन् । त्यसै समयमा अन्तरजातिय विवाह गरेकी उनले संगीतप्रतिको आफ्नो भोकलाई कायमै राखिन् र अन्ततः भ्वाईस अफ नेपालमा उनको आवाज गुञ्जियो । चर्चित गायिका आशा भोष्लेको आवाजमा रहेको ‘किन बढ्दैछ मेरो ढुकढुकी’ बोलको गीत गाएकी रमाले ३ जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल भईन् । कोच राजु लामा बाहेक अन्य तिनै जना कोच उनीतर्फ फर्किएका थिए । जसमध्ये उनी टिम दिपमा समावेश भएकी छिन् ।
२) साजन लामा, धनगढी–भ्वाईस अफ नेपालमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका अर्का प्रतियोगित हुन् साजन लामा । २६ वर्षीय साजन सुदुर पश्चिमको धनगढीका हुन् । भजन गाउँदै साँगितिक यात्रा सुरु गरेका साजन कतारमा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा समेत कार्यरत छन् । चर्चित नेपाली कथानक चलचित्र अल्लारेको ‘अब चोटहरुले’ बोलको गीत गाएका उनले कोच प्रमोद खरेल र आस्था राउतलाई आफुतिर फर्काउन सफल भएका थिए । उनले प्रमोद खरेलको टिममा आफुलाई समावेश गरेका छन् ।
३) सनिश श्रेष्ठ, कोटेश्वर, काठमाडौँ–हजुरबुवाबाट गीत गाउने प्रेरणा पाएका सनिशले हजुरबुवाले भजन गाएको देखेर सँगीतमा रुचि राखेका थिए । गीतार बजाउँदै गीत गाउँदै गरेका उनी गीतारकै कारण आफुले पढाईमा खासै उन्नती गर्न नसकेको सुनाउँछन् । १९ वर्षीय सनिशले चर्चित नेपाली कथानक चलचित्र प्रसादकौ लै लै बोलको गीत गाएका थिए । भ्वाईसको दोस्रो सिजनमा उनी चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् । उनी कोच राजु लामाको टिममा छन् ।
४) निर्मला घिसिङ, फापरबारी,मकवानपुर–पूर्वी मकवानपुरको तत्कालिन फापरबारी गाविस वडा नम्बर ४ लामिटार निवासी निर्मला तामाङ समुदायकी चर्चित गायिका समेत हुन् । विभिन्न गीतमा आवाज दिइसकेकी २७ वर्षीय निर्मला माओवादी जनयुद्धकालमा साँस्कृतिक आन्दोलनमा समेत होमिएकी थिईन् । काठमाडौँको बौद्धमा कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरेर गाउँमा गएकी उनी माओवादको सिद्धान्तबाट प्रभावित भईन् र माओवादी आन्दोलनमा लागिन् । जनसाँस्कृति परिवारमा रहेकी उनी विभिन्न युद्ध र शैन्य प्रशिक्षणमा समेत लागेकी थिईन् । युद्धको कहालीलाग्दो रुप समेत देखेकी उनले कठोर बन्न सिकेकी थिईन् । माओवादी युद्धमा कठोर बन्न सिकेकी निर्मलाले भ्वाईस अफ नेपालको मञ्चमा भने आँशु रोक्न सकिनन् । किन कि उनको आवाजले ३ जना कोचहरुलाई फर्कन बाध्य बनायो । प्रेम परियारको ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ बोलको गीत गाएकी उनको आवाज सुनेर कोच आस्था राउत बाहेक ३ जना कोच फर्किएका थिए । उनी टिम दिपमा छन् ।
५) रजनी रिदम राई, दार्जिलिङ, हाल पोखरा–दार्जिलिङबाट साँगितिक यात्रा थालेकी रजनी अहिले पोखरामा बस्छिन् । पोखरा बसाईमा एक दशक लामो यात्रा तय गरेकी रजनीले सानैदेखि संगीत क्षेत्रमा लागेका कारण आफ्नो नाममा रिदम जोडिन् । आफुलाई मनपर्ने नाम भएका कारण उनले आफ्नी १० वर्षीय छोरीको नाम पनि रिदम नै राखेकी छिन् । साँगेतिक करियरकै क्रममा पोखरामा श्रीमानसँगै आएकी रजनीले त्यसबेला ठूलो चोट पनि सहिन् । संगीतकार समेत रहेका आफ्नो पतिसँग उनले छुट्टिएर बस्नुपर्यो । जसका कारण उनकी छोरी पनि दार्जिलिङमै बसिन् । छोरीको खुशीका लागि पनि उनी आफु भ्वाईसमा आएको बताउँछिन् । ३३ वर्षीया रजनीले ब्लाईन्ड अडिसनमा पुरानो हुँदैन माया बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा कोच आस्था बाहेक अन्य ३ जना कोचहरु उनीतिर फर्किएका थिए । उनी कोच दिपको टिममा छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको दोस्रो भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।
मोबाईलबाट युट्युब च्यानल बनाउने तरिका